Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga oo ku tilmaamay ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya waqti aan habooneyn – idalenews.com
Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Soomaaliya Xuseen Carab Ciise oo ah Gudoomiyaha Gudiga difaaca ee Baarlamaanka ayaa ka digay hadii Ciidamada Itoobiya ka baxaan Soomaaliya inay keeneyso in Al-Shabaab dib u qabsato deegaanada ay baneeyaan ciidamada.
Xuseen Carab Ciise ayaa ku tilmaamay ka bixitaanka Itoobiya mid aan waqtigeeda aheyn, isagoo tibaaxay in Ciidamada AMISOM ay ka qeyb qaadan doonaan sugida ammaanka iyo sidii ay ugala wareegi laheyd goobaha ay baneeyaan.
“Ciidanka dowladda iyo Ciidan AMISOM waa joogaan waa la soo kordhinayaa, waxaa la geynayaa meelaha ay ka baxaan, laakiin waqtigeeda ma ahan in Itoobiyaan baxaan”ayuu yiri Xuseen Carab Ciise.
Mr Carab ayaa sheegay inay tahay in marka hore la isku hubsado ammaanka, si ciidamada ay u kala wareegaan goobaha ay ka baxayaan Ciidamada Itoobiya, waxaana rajo uu ka muujiyay in Ciidamada AMISOM ay qaadan doonaan doorkooda.
Taliyaha ugu sareeya AMISOM Jen. Gutti ayaa sheegay in aan loo dhutin doonin Ciidamada Itoobiya hadii ay baxaan, hase ahaatee Saraakiisha AMISOM ayaa wada hadal kula jira Saraakiisha Itoobiya inta laga soo dhameystiray ciidamada in aanay ka bixin deegaanada.
Dowladda Itoobiya ayaa si rasmi shaaca uga qaaday inay ka baxeyso gobolada koofureed, kadib markii ay sheegtay in caalamka wax dhaqaale ah uga helin, isla markaana waqtigii ay fileysay inay ku sii joogto uu fogaaday.
Madaxweynaha xilka ka sii dega ee Kenya oo ugu baaqay dowladda bedeleysa inay dhowraan heshiisyadii Soomaaliya